Dr. Nyi Nyi Kyaw - Clinical Nutrition Specialist (Dr. Nutrition Clinic)
👨‍🎓 Student By : Dr. Nyi Nyi Kyaw - Clinical Nutrition Specialist (Dr. Nutrition Clinic)
Nutrition နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ကတော့ ဒီမှာ ရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ တွေ နဲ့ သင်ကြားခွင့်ရသလို Mahidol University မှ ဆရာ၊ ဆရာမ များ ဆီကနေလည်း ပညာ ဆည်းပူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီအပြင် UOB မှ Sport Nutrition ပါ လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ နောက် အတွေ့အကြုံကောင်း အနေနဲ့ ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ရှိ Bumrungrad International Hospital, Bangkok International Hospital, Theptarin Hospital, Ramathibooti Hospital တွေ မှာ internship ဆင်းခဲ့ရတာတွေ ကတော့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး။
"Do not care about what other people talk to you, Just care about yourself. As in same way, choose your career path with your brain and heart not with other people opinions."